Ndị mmeri mmeri pụrụ iche pụrụ iche - Magazin Oke - pisklak.net
Ndị mmeri mmeri pụrụ iche pụrụ iche – Magazin Oke
May bụ ọnwa pụrụ iche na cha cha cha cha cha cha cha maka ndị egwuregwu niile na-asọ mpi na ndị ọzọ. Ya bụ, anyị mere ka onyinye ahụ baa ọgaranya site na asọmpi oghere pụrụ iche aha ya bụ “Spinner Winner” yana dịka echiche mbụ, ị masịrị ya.
Pụrụ Iche oghere ndorondoro “Spinner Winner”
Ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu na nwanne anyị nwanyị cha cha Brango mgbe ahụ ị maara banyere oghere Heist. Ugbu a, anyị na-enye gị otu ihe ahụ na crypto cha cha Oke aha ya “Spinner Winner Chicken Dinner”. Iwu dị mfe ma nwee ohere iji merie buru ibu.
Nke mbu, igaghi agha iji nara ihe nrite. Naanị igwu egwu nwere ike ime gị Onye mmeri Spin na-achịkọta ihe nrite kwa izu. Ya bụ, Tuesday ọ bụla anyị ga-ebido Spinner Winner Tournament na-enye gị ohere ịbanye gburugburu nke ndị mmeri. Ga-atụrịrị, ị ga-agbagharị. Nanị, ka ị na-egwu egwu, ka ị ga-enweta.
Ikpeazụ Ikpeazụ mmeri
Dịka ikekwe ịmaraworị, otu ugboro n’izu ndị egwuregwu iri ise kachasị dị elu na-ekenye onyinye na ego, ibe, na ego efu. Onye mmeri nke izu na-enweta $ 400 ego, ndị na-egwu egwuregwu na-anọ ebe atọ na-esote ga-enweta $ 250, $ 200, na $ 150 na ego, n’otu n’otu.
Onye mmeri nke asọmpi oghere pụrụ iche maka izu gara aga bụ onye ọkpụkpọ ama ama ama ama ama ama ama, ama ama ke n̄ka ndondo emi. Naanị ihe ọ ga-egwu bụ oghere kachasị amasị ya, ya mere o mere naanị ihe achọrọ. Oghere ndị ọ kachasị rụọ bụ IC Wins, Spring Wilds, Witchy Wins, na Stardust. Maka ọtụtụ ntụgharị ọ mere n’oge izu gara aga, ụgwọ ọrụ ya bụ $ 400 na ego.
Otu onye egwu na-eguzosi ike n’ihe na Casino Extreme nọ n’ọnọdụ nke abụọ na ụgwọ ọrụ nke $ 300 na ego. Nwaanyị a nwere obi ụtọ na-ejide ọkwa platinum na ụlọ VIP anyị na uru niile na-eso ya. Egwuregwu ya kachasị nwee izu gara aga bụ Asgard, yana ụdị nke Asgard Deluxe, Cash Bandits, Lucky 6 na Cai Hong.
Egwuregwu nke onye ọkpụkpọ nke meriri ebe nke atọ bụ Halloween Treasure, Plentiful Treasure, Wild Fire 7s. O yiri ka Sweet 16 oghere bụ egwuregwu kachasị amasị nke onye ọkpụkpọ na ebe nke anọ nwetara $ 150. N’ime izu gara aga, ọ na-egwu oghere a ma na-enyocha ọtụtụ isi.
Iji bụrụ onye mmeri n’egwuregwu oghere a, ọ dịghị mkpa maka mbọ ọzọ n’akụkụ gị. Naanị ịga n’ihu na-egwu oghere ndị kachasị amasị gị ma lelee onye ndu anyị iji hụ ọkwa.